दिल्लीमा फेरि आम आदमी : ७० सिटको विधान सभामा आम आदमीले ६२ सिट जित्दा भाजपालाई ८, कंग्रेस शून्य
पर्शुराम काफ्ले नयाँदिल्ली
२०७६ माघ २९ बुधबार ०६:२०:००
पर्शुराम काफ्ले, नयाँदिल्ली
सन् २०१५ को विधान सभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ मतसहित पाँच वर्ष दिल्लीको बागडोर हाँकेको आम आदमी पार्टी (आप)ले लोकप्रिय जित दोहोर्‍याएको छ । ७० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा आपले ६२ सिटसहित दुईतिहाइ निश्चित गरेको हो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले आठ सिट समेट्दा कंग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन । दुईतिहाइ जितसँगै आपले तेस्रोपटक सरकार बनाउने भएको छ । अध्यक्ष अरबिन्द केजरिवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा ‘ह्याट्रिक’ गर्दै छन् ।
सन् २०१३ मा केजरिवाल ४९ दिन दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिवेला विधान सभा निर्वाचनमा आप २८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा थियो । पहिलो स्थानमा रहेको भाजपाको ३२ र तेस्रो भएको कांग्रेसको आठ सिट थियो । भाजपाले सरकार बनाउन नसकेपछि कांग्रेसको सहयोगमा आपले सत्ता सम्हालेको थियो । तर, पछि कंग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ४९ दिनमै केजरिवाल सरकार ढलेको थियो ।
२०१५ मा फेरि भएको निर्वाचनमा आपले ६७ सिटसहित दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि केजरिवाल दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उक्त निर्वाचनमा भाजपा तीन सिटमा खुम्चिँदा कंग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । पाँच वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत जनताका मुद्दामा सुधारसहित सहुलियत दिएका केजरिवालले दिल्लीमा लोकप्रियता घट्न दिएनन् । मंगलबार अपराह्न निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै उनले आफ्नै छोरा सम्झेर मत दिएकोमा दिल्लीवासीप्रति आभाव व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केजरिवाललाई बधाई दिएका छन् ।
निर्वाचनमा केजरिवाल सरकारले विगतमा गरेका कामका आधारमा मत दिन आग्रह गरेको थियो । भाजपाले भारतमा जम्मु–कस्मिरको मूल प्रवाहीकरण, नागरिकता ऐन, अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दा अघि सारेको थियो । भाजपाले १५ वर्षदेखि म्युनिसिपल कर्पोरेसन अफ दिल्ली (एमसिडी) अर्थात् दिल्ली महानगरको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर, फोहोर उठाउने र कक्षा ६ सम्मको सरकारी शिक्षाको जिम्मा पाएको महानगरले काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । भाजपाको हारका पछाडि महानगरको कुशासनसमेत कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
भाजपा प्रवक्ता नितु डबासले पनि काम गरेरै केजरिवाल सरकार लोकप्रिय बनेको स्विकारेकी छिन् । चुनावी परिणामसँगै प्रवक्ता डबासले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘केजरिवाल सरकारको काम, कंग्रेसले कडा उम्मेदवारी नदिनु र भाजपाको एजेन्डा तथा नेतृत्वका सम्बन्धमा विचार पुग्न नसक्नुका कारण यो अवस्था आएको हो । भाजपाले यसबाट अवश्य पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।’
भाजपाले सन् १९९३ देखि १९९८ मा दिल्लीमा सरकार गठन गरेको थियो । त्यसवेला सुरुका अढाई वर्ष मदनलाल खुराना र त्यसपछि साहिबसिंह बर्मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । सन् १९९८ मा सुष्मा स्वराज नेतृत्वमा भाजपाले दिल्लीमा सरकार गठन गरेको थियो । तर, प्याजको भाउ वृद्धिका कारण स्वराज नेतृत्वको सरकार ५१ दिनमै ढलेको थियो । सन् १९९८ पछि कंग्रेस नेतृ शिला दीक्षित नेतृत्वको सरकार १५ वर्ष चलेको थियो । केजरिवालको सरकार निरन्तर छ । दिल्लीस्थित स्तम्भकार एवं भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्का अध्येता डा. राकेशकुमार मिनाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दिल्लीमा जनताले परिवर्तन चाहेका थिए, आम आदमीले परिवर्तन गरेर देखाइदियो । त्यसको बदलामा मत पाएको हो ।’
दिल्ली निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेका टाइम्स अफ इन्डियाका सहायक सम्पादक रुद्रोणिल घोषले आपले स्थानीय मुद्दा र नेतृत्व स्थापित गरेको बताए । घोषले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आम आदमी पार्टीले स्थानीय मुद्दा र नेतृत्व स्थापित गर्‍यो । केजरिवाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ र सामाजिक जीवनमा सुधार आउने गरी काम गर्‍यो । तर, भाजपाको स्थानीय नेतृत्व र एजेन्डा दुवै थिएन । यतिसम्म कि १५ वर्षदेखि दिल्ली महानगरको नेतृत्व गरिरहेको भाजपाको असफल काम पनि निर्वाचनमा उद्घाटित भयो ।’
दिल्ली निर्वाचनमा आम आदमीको स्थापित नेतृत्व र स्थानीय एजेन्डाका अगाडि भाजपाको नेतृत्व सशक्त थिएन ।
दिल्ली प्रान्तका अध्यक्ष मनोज तिवारीलाई भाजपाले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थिएन । चुनावपछि भाजपाको विकासे एजेन्डाबारे नवभारत टाइम्सका एक पत्रकारले प्रश्न गर्दा तिवारीको अनौपचारिक जवाफ थियो, ‘मलाई यसबारेमा थाहा हुँदैन, अमित साह र नरेन्द्र मोदीले जे भन्नेछन्, म त्यही गर्नेछु ।’ भाजपाको केन्द्रीकृत नेतृत्व र केन्द्रीय एजेन्डाले दिल्लीमा काम गरेन । भाजपाले राष्ट्रिय चुनावको झल्को दिने गरी चुनावी प्रचारप्रसार गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि भोट मागेको थियो । समाजवादी पार्टीको पृष्ठभूमिबाट भाजपा पुगेका तिवारी आरएसएस पृष्ठभूमिका होइनन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाका पत्रकार घोषको विश्लेषण छ, ‘अटल बिहारी बाजपेयीका पालामा भाजपामा मध्यमस्तरीय नेता थिए, अहिले नरेन्द्र मोदी र अमित साहबाहेक अरू नेता छैनन् । प्रान्तमा आरएसएस पृष्ठभूमिबाहेकका नेताहरूलाई भाजपा नेतृत्वले प्रोत्साहित गरिरहेको छैन ।’ लोकसभामा भने दिल्लीका सबै (सात) सिटमा भाजपाले निर्वाचन जितेको छ । आम आदमीको लोकसभामा शून्य उपस्थिति छ भने राज्यसभामा जम्मा दुईजना सांसद छन् । दिल्ली चुनावमा कंग्रेसले पनि आम आदमी पार्टीलाई समर्थन गरेको थियो ।
केजरिवालले के गरे चमत्कार ?
दिल्लीको सत्ता सम्हालेको पाँच वर्षमा केजरिवालले निम्न वर्गलाई लक्षित गरी योजना ल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीको सुविधा बढाए । उनको सरकारले हरेक परिवारलाई दुई सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिएको छ । २० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क बाँडेको छ ।
केजरिवाल सरकारले दिल्लीका सार्वजनिक यातायात विद्यार्थी र महिलालाई निःशुल्क बनाएको छ । एक सर्वेक्षणअनुसार दिल्लीमा पुरुषभन्दा महिला मतदाताले आपलाई मत दिएका छन् ।
दिल्ली सरकारले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधारेको छ भने हरेक बस्ती (कोलोनी)मा महल्ल क्लिनिक नामको प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराएको छ । स्थापित चिकित्सकीय सेवा र अधिकांश स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क गराएको छ ।
जनपक्षीय काम गरेर पनि केजरिवालले चुनावी प्रचार भद्र रूपमा गरे । आफूले गरेको काम मतदातालाई बुझाउँदै हिँडे । तर, भाजपाका जिम्मेवार नेताले नागरिकतासम्बन्धी कानुनको विरोध गर्ने व्यक्ति देशद्रोही भएको आरोप लगाए । केजरिवालले ल्याएको सुशासनको खिल्ली उडाए । व्यक्तिगत आलोचनामा उत्रिए । भाजपाको प्रचार शैलीले दिल्लीको मत केजरिवालतिर झन् नजिक भयो ।
नागरिकता ऐन र अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण गर्ने भाजपा निर्णयबाट दिल्लीका मुस्लिम खुसी थिएनन् । दिल्लीमा १४ प्रतिशत मतदाता मुस्लिम छन् । उनीहरू यस्तो पार्टीलाई मतदान गर्न आतुर थिए, जसले भाजपालाई हराउन सक्छ । उनीहरूले आम आदमीलाई रोजे ।
#आम आदमी # दिल्ली # विधान सभा
बेइजिङलाई रिझाउने, दिल्लीलाई चिढ्याउने कूटनीति
संविधान संशोधनपछि के हुन्छ नेपाल-भारत वार्ता ?
ज्वरो आएपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको कोरोना परीक्षण गरिँदै
सिराहाका पाँच संक्रमित भारतको दिल्ली र हरियाणाबाट आएका
निर्भया बलात्कार काण्ड : चारजनालाई फाँसी दिइयो